Ramarosaona Franck : « leo tanteraka ny vahoaka ary halohalika ny ranombary” | NewsMada
Ramarosaona Franck : « leo tanteraka ny vahoaka ary halohalika ny ranombary”
Nitondra famafakafakana ny fahitany ny raharaham-pirenena tamin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny onjampeo Alliance 92 FM, ny talen’ny famoahana (DP) ny Vondrona Ultimamedia, Ramarosaona Franck, omaly. Nambarany fa mampanahy ny ho avin’ny firenena. Ampahany amin’ny resadresaka. ..
Fijery mahitsy sady tsotra. “Leo ny vahoaka satria mahita ny fiainany tsy mivoatra ary tafiditra lalina amin’ny fahantrana. Mikorosy fahana ny toekarena, tsy voahaja ny zon’olombelona, tsy misy fandriampahalemana… Ny fisondrotry ny vidim-piainana. Mety ny ao anaty fanjakana ihany koa ny ao ambadik’izany mba tsy hitiavan’ny vahoaka ny fitondrana”, hoy izy. Nanteriny fa anisan’ny vahoaka ny fiarahamonim-pirenena, ny fiangonana, ny antoko politika, ny sendikà sy ny sehatra tsy miankina. “Mampatahotra ny tranga satria maro ny mpanararaotra ary maro ireo efa matihanina any ho any. Efa mivoaka izy ireo izao ary hampirisika ny olona hidina an-dalambe. Anisan’ny mahatonga izany ny fihetsiky ny fanjakana. Ho avy koa ny avy any ivelany hijery ny hotohanana amin’ity raharaha ity. Tsy azon’ny mpitondra mihitsy izany rehetra izany…”, hoy ihany izy.
Momba ny fahalanian’ilay lalàna hifehy ny fifidianana kosa, nambarany fa efa nampoizina izany. Ho azy, nanaovana sarimihetsika fotsiny iny lalàm-pifidianana iny nandritra ny herintaona nandrafetana azy io. Tahaka ny nanaovana ny lalàna hifehy ny serasera sy ny fifandraisana.
Manao sarimihetsika fotsiny ny fitondrana
Nasaina sy nakana hevitra ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, nandalo teny anivon’ny komity iraisan’ny minisitera. “Efa nanana ny vinavinany anefa ny fitondrana ary nandefa izany teny amin’ny parlemanta. Manao ny tiany izy ireo ary tsy misy fanitsiana fa sarimihetsika avokoa ny ankoatran’izay. Mody natao hoe efa nakana ny hevitry ny rehetra. Amboletra ny nandaniana azy iny satria tsy nekena ny fanitsiana. Efa nanana ny heviny ny HVM amin’ny fomba handaniana ny filoha amperinasa amin’ny fifidianana manaraka”, hoy Ramarosaona Franck. Nohitsiny fa misy mifandaka amin’ny lalàmpanorenana izany lalàna izany. “Fa eo koa ny tahotra ireo kandidà sasany matanjaka. Ohatra, Rajoelina sy Ravalomanana, tsy tian’ny HVM hifaninana amin’ny filoha Rajaonarimampianina”, hoy izy. Mbola eo koa anefa ireo kandidà hafa nampidirina amin’ny CPAC nampangaina ka nomena fahafahana vonjimaika (LP). Tafiditra amin’ilay lalàna anefa fa tsy afaka mifaninana ireo nahazo LP amin’ny “Bulletin N°2”. Efa nanambara izany ny HVM sy Rakotovao Rivo fa tsy afaka mirotsaka ireo efa nandika lalàna na tsy nandoa hetra na koa tsy madio.
Notsiahiviny avy eo ny nahazo an-dRavalomanana namory vahoaka tany Taolangaro sy Toliara. “Jereo ny nanjo azy fa tsy navela hanao izany. Lasa adim-poko. Miditra an-tsehatra ny prefektiora. Rajoelina tany Ambilobe, nahavory vahoaka maro. Nesorina ny sefo distrika avy eo. Tany Mahajanga indray, rakotra vahoaka hitsena ny filohan’ny Tetezamita. Nefa ireo milaza fa tompon’i Mahajanga : Rakotovao Rivo sy Rolly Mercia gaga nahita ireo vahoaka. Izany hoe tsy manana ny lanjany izy ireo ka nanao ny fomba tsy hahatongavan-dRajoelina tany. Nambara fa resaka teknika sy filaminana ny tsy nandehanan’ny fiaramanidina tokony hitondra azy”, hoy izy.
Tsy hanampy antsika amin’ny fifidianana ny iraisam-pirenena
Momba ny mety ho hevitry ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny lalàm-pifidianana kosa, nambarany fa mampanahy ny mety hampitsaharany ny famatsiambola “basket fund” amin’ny fifidianana . “Kely ny anjara volan’ny fanjakana amin’io tahiry io. Tonga eto ny Sadc, ny Vondrona afrikanina ary ny OIF efa nandalo teto… Nanery antsika izy ireo hamoaka datim-pifidianana. Niteny iny minisitry ny Raharaham-bahiny tany amin’ny fahitalavitra frantsay nanondro daty… Mino aho fa tsy nandainga ny minisitra ka tsy hiteniteny foana… Manahy ihany aho anefa fa tsy hanampy antsika amin’ny fifidianana ny iraisam-pirenena satria mitaky fifidianana tsy manilika ary andraisan’ny rehetra anjara izy ireo”, hoy izy. Notsiahiviny avy eo ny lalana handalovan’ilay lalàna nolanin’ny depiote teo. Handalo eny amin’ny Antenimierandoholona izany izao. Na izany aza anefa, nohitsiny fa eo ambany ziogan’ny HVM ireo loholona ireo. “Ho tompon’ny teny farany kosa ny HCC amin’ny fijerena na manaraka na tsia ny lalàmpanorenana ilay lalàna. Arahaba soa kosa raha hamerina ny andininy sasany hodinihina izy ireo raha hitany fa tsy manaraka ny tokony ho izy izany. Ho tompon’antoka kosa anefa izy ireo amin’ny mety hisian’ny korontana eto amin’ny firenena raha manaiky befahatany io lalàna io”, hoy ihany Ramarosaona Franck.
Nampitahainy amin’ny firenen-kafa kosa ny fihetsiky ny fitondrana manoloana ny hetsika ataon’ny olona. Nambarany fa mitokona ny SNCF any Frantsa, fa tsy miteny ny filoha Macron. Ny eto amintsika anefa tonga avy hatrany ny Emmo raha vao mitangorona ny olona, araka ny nambarany. “Maty ny zandary any atismo. Manao herim-pamoretana any an-dapa sy any Mahajanga ka tsy mahavita ny asa tokony hatao ny Emmo. Manjaka ny dahalo ambony latabatra. Mbola mahazo vahana ny fitsaram-bahoaka. Hita sy iainana izany ary miparitaka hatrany ivelany ka tsy handroso mihitsy isika ”, hoy ihany izy. Nanteriny fa tokony hotohizan’ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ilay hetsika “Aoka izay” momba ny tsy fandriampahalemana. “Andrana iny hetsika iny nefa tokony hitambaran’ny rehetra amin’ny manaraka ary hiarahana hoe “aoka izay” ity fitondrana ity…”, hoy ihany izy.
Tsy handeha lavitra ny fitorian’ny Tim/Mapar
Tsy mino kosa ny tenany fa ho lasa lavitra ny momba ilay fitorian’ny Tim/Mapar eny amin’ny Bianco. “Hitantsika iny “Raharaha Claudine” iny. Izy irery no voarohirohy fa ny nanome vola sy ny tsena azy tsy nohadihadian’ny Bianco… Nahoana ny tsy voakitika ny sasany sy ny antanan-tohatra aty ambony. Mety ho fihetsiketsehana fotsiny ny an’ny Tim sy ny Mapar fa tsy handeha lavitra io raharaha io”, hoy izy. Nampitoviany amin’izany koa ny momba ny tale jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana teo aloha (DGT), Robimanana Orlando ka nilazany fa tsy misy idirany iny resabe iny ary efa nazava ny nambaran’ny Bianco momba azy. “Natao fanahiniana fotsiny izany manoloana ny haha kandidà azy noho ny tahotra ho tratran’ilay “Bulletin N°2”, hoy izy. Namaranany ny resaka ny nanambarany fa mizotra any amin’ny lalan-dratsy ny firenena ary hahery vaika izany manoloana ny tsy faneken’ny olona izao tsy fisian’ny fahalalahana sy ny demokrasia izao. Ny fanitsakitsahana ny lalàna. “Efa maro ireo mihevitra ny hidina an-dalambe satria tsy hanova famindra intsony ny fitondrana”, hoy Ramarosaona Franck.